Qiimayntii Waxqabadka 2006 T.I Ee Hogaaminta Iyo Saraakiisha Ciidanka Police-ka Gaarka Ah Ee DDSI Oo Lasoo Gabagabeeyay. - Cakaara News
Qiimayntii Waxqabadka 2006 T.I Ee Hogaaminta Iyo Saraakiisha Ciidanka Police-ka Gaarka Ah Ee DDSI Oo Lasoo Gabagabeeyay.
Jigjiga(CN) Isniin Sep.22.2014, Waxaa lasoo gabagabeeyay qiimayntii shaqooyinka waxqabadkii sanadka 2006-da ee hogaaminta Ciidanka Policeka Gaarka ah ee DDSI oo socotay muddo 3 cisho ah. Qiimayntan ayaa abaal marino kala duwan lagu gudoonsiiyay sariikiishii iyo rajmantiyadii kala duwanaa ee guulaha laxaadka leh soo hoyiyay gaar ahaan tirtirida iyo qabashada hogaamintii UBBO iyo dagaalkii Alqushaash laga qabtay 7 saldhig ee waawayn oo ay kamid ahaayeen xeryaha Lagalaay iyo Garaswayne.
Waxaana qiimayntan lagusoo afjaray xaflad balaadhan oo ay kasoo qaybgaleen hogaaminta sare oo ay ugu horeeyaan Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo Gudoomiyaha xisbiga ahna afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq, hogaaminta ciidanka, golaha capinetka iyo shaqaalaha kala duwan ee DDSI, kooxda hobolada iyo hidaha dhaqanka, taasoo kadhacday madasha shirarka ee Qaryaan Dhoodaan.
Ugu horayntii waxaa warbixin dheer kasoo jeediyay General C/raxmaan Cabdulaahi oo si qoto dheer uga warbixiyay waxqabadkii kala duwanaa ee sanadkan ciidanku kasoo shaqeeyay. Jenanka ayaa ku bilaabay in ciidanku uu ka aasaasmay ilmadii shacabka ee dhibaatooyinkii nabdiidka islamarkaana u taagan ilaalinta dastuurka dalka iyo deegaanka.
Jenanka ayaa sheegay in targetka sanadkan uu ahaa hogaaminta UBBO iyo xuduudaha in laxidho, Waxaana gacanta lagu dhigay hogaamintii UBBO iyadoo dib loo isticmaalay xubnihii nabadiidka oo lagusoo saaray qalabyadii u aasnaa kadib markii ay dareemeen dhibaatada ay shacabkooda kuhayeen.
Sidoo kale wuxuu jenanku si faah faahsan usoo bandhigay guulaha ay ciidanku soo hoyiyeen iyo waxqabadkoodii ugu muhiimsanaa sida cadawga gacanta lagu dhigay, qalabyada kala duwan ee cadawga laga soo saaray, hawlgaladii u danbeeyay iyo wax qabadkaloo badan. Waxaa kaloo jananku kawarbixiyay hawlaha dhismayaasha kala duwan ee ciidanku sameeyay sida xafiisyada, iskuulada, wadooyinka, masaajida, iyo qodista baraagaha.
Waxaa kaloo warbixinta lagusoo bandhigay hawlgaladii caalamiga ahaa gaar ahaan jawaabtii deg dega ahayd ee ciidanku cashirka ugu dhigay gardaradii Alqushaash taasoo cadaw badan lagu dilay oo ay 12 ajaanib ah kujireen islmarkaana gacanta lagu dhigay 7-dii fadhiisimood ee waawaynaa sida Lagalaay iyo Garaswayne.
Qiimayntan ayaa sidoo kale waxaa si casri ah loo diyaariyay qorshihii 2007-da oo si isku dhaf ah diirada u saaraya hawlaha nabadgalyada, xidhiidhka dadwaynaha iyo horumarka deegaanka.
Qorshahan ayaa waxaa kamid ah 11 tuulo oo cusub hada kahorna aysan ciidanku daganayn kuwaas o ay kamidyihiin tuulooyinka Isgoyska Boodaleey, Duud Fiiq, Qarde oo Garbo ah iyo kuwo kale. Waxaana tuulooyinkan dagi doona Ciidankii cusbaa ee dhawaanta kabaxay tababarka.
Mar uu jananku kahadlayay qorshaha ayuu yidhi " Anigoo ku hadlaya afka ciidanka ayaa waxaan balan qaadaynaa inaan markasta u taaganahay danta shacabka iyo saraynta sharciga, waxaana markasta u taaganahay inaan kahortagno cidkasta oo isku dayda inay khalkhal galiso nabadgalyada iyo horumarka deegaanka gudaha iyo dibadaba. "
Warbixinta ciidanka kadib ayaa waxaa madasha kahadlay Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo aad uga mahadceliyay waxqabadka ciidanka islamarkaana kula dardaarmay in lasii xoojiyo hawlaha gaar ahaan xidhiidhka dadwaynaha iyo kasbashada shacabka oo loo ahaado kabaha shacabka.
Sidoo kale Afhayeenka Baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa sheegay in ciidanku uu shaqooyin badan oo muhiima u qabtay shacabka iyo deegaankaba, ciidankuna uu yahay ciidan u taagan danta shacabka.
Afhayeenka ayaa yidhi " Ciidanka Police-ka Gaarka ah wuxuu UBBO gaadhsiiyay meel aysan waligood kasoo kaban karin. "
Ugu danbayntii, Afhayeenka iyo madaxwaynaha ayaa abaal marin kala duwan ku gudoonsiiyay saraakiishii iyo rajmantiyadii guulaha kala duwan kasoo hoyiyay shaqooyinkoodii sanadka 2006-da.
Ciidamada Booliska Gaarka ah, oo ah laf-dhabarta nabadgalyada iyo horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya islamarkaana hantay guulo iyo isbadalo taariikhi ah ayaa markasta ku hawlan qorshayaal iyo istratijiyado katurjumaya nabadgalyada iyo horumarka shacabka iyo deegaanka. Ciidanka Police-ka Gaarka ah ayaa si kago'naansho leh ficil ahaan u muujiyay in ay yihiin kabaha shacaka, taasoo ay ku xaqiijiyeen dadaalada aan hadh iyo habeen kala go' lahayn ee ay u fidinayaan shacabka iyo deegaanka.